Date My Pet » 7 Misi wose From New York City Rinoenderera Mberi
kubudikidza Nidhi Mathew
7 Misi wose From New York City Rinoenderera Mberi
Kana uri muNew York City nomumwe wako, nechokwadi kumurega maminitsi mashoma kuverenga kuburikidza peji ino. Ko tarisa nhaurirano kunyange kana uri kuroorwa uye kutsvaka shamwari muguta; kubatsira kuedza kubva mumwe izvi nokuda kwenyu itsva rudo zvirokwazvo iwe kusika vakanaka. saka, heano misi nomwe vose kubva kuNew York City ANOTANGA (verenga vanofanira kuenda) pamusoro.
1. Zvepasi kwezuva kubva Frying Pan
For vechiduku vakaroorana, zvirokwazvo nzvimbo iyi musi Hudson ndeimwe Hottest zvokufambidzana dzokugara guta parizvino dzimba. The Pan, riri izwi rinoreva mungarava lightship pamusoro 1929, vakapindira vakamutswa uye nhasi zviri chimwe chezvinhu electrifying svetuka mbariro iwe anombofa.
The Maonero kwezuva pamusoro Hudson River ndiye zvirokwazvo scintillating uye inowedzera kubatwa dzorudo kusvikira ambiance pamusoro pamatanda.
2. Kupedza kudanana masikati panguva Brooklyn Botanical Garden
Kana mangoti zvauchasangana kupinda ichi oasis dzomumaguta muna Tariro Heights, iwe uchava sokuti mauya makiromita kubva Chipatapata chiri muguta.
The Brooklyn Botanical Garden ane zvakakwana dzinongoitika pfuma kuchengeta iwe nemumwe wako kuroora memaawa; semuyenzaniso, ari Native Flora Garden, ari Cranford Rose Garden, ari Shakespeare Garden uye zvakawanda. zvisinei, zvauchabayira kuita kupfuura pamusoro nzvimbo ndiyo chinonyevenutsa uchinetseka kupinda dzakawanda dzimwe muguta.
3. A rwendo kuna Flushing zvokudya Malls
Zvokudya Malls muna Flushing, New York City vari yakakurumbira yokushumira inonaka Cantonese uye Mandarin ndiro.
Izvi yaizova zuva wakakwana nokuda bonafide zvose foodies iwayo. Vanhu vane tsika vaiswe mifananidzo kudya ose vane ari pasocial network vachawanawo ichi kufambidzana pfungwa zvikuru vakataura zvainakidza.
4. Travel shure munguva:
Kutarira kupedza imwe nguva huru nomumwe wako panguva kuwa? Ronga musi muimba usingakanganwiki navatana musha Richmond Town.
5. Kushanyira Central Park
Central Park inzvimbo huru kuenda nemumwe wako mumwedzi yezhizha. Ichokwadi kuti chirimo muNew York City kazhinji taxingly nyorovera; zvisinei, mugariro anova unofadza kamwe zuva rovira. Semagumo, mumwedzi yezhizha, unogona kuronga manheru misi nyore pakachena.
Central Park, zvose varaidzo zvokusarudza ane, Zvirokwazvo nzvimbo huru kuenda musi.
6. Itai Vakaseka at The patapata Room
Kuronga kuenda nemumwe wako pamusoro Chipiri usiku? Unogona kufunga kumbomira by patapata Room. Chipiri ose, ari burlesque vakatozodzokera mumatanho Seth Herzog kuti Comedy ratidza. naye, Herzog Kazhinji ane ake anoshamisa uye hilarious Amai.
7. Nakidzwa firimu musi panguva Bryant Park
Izvi yaizova zuva wakakwana nokuda bhaisikopo buffs uye navose mafeni ose Classics; asi, yeuka firimu musi panguva Bryant Park vanofanira nguva dzose kurongwa neMuvhuro.
Monday ose, pakuvira kwezuva, chinhu firimu makomba kunoratidzwa pana ichi voga vakakwanisa pachena paki. vamwe nezvikafu zvishoma, nedende rewaini negumbeze kuchengeta vaviri imi unodziya zvaizova zvakakwana kuva kudanana Movie zuva.
Unogona kutora mumwe wako zvikuru kudanana nzvimbo muNew York City, asi kuti zuva inobudirira chete, uchaita kuda huru chirungiso uye kuti rudo.
9 Misi wose From San Francisco Rinoenderera Mberi
Kufamba nemotokari yako dzinovaraidza
3 Secrets kuti Dating pamusoro Budget Student
7 Chokwadi Pamusoro Pet Lovers
Yappily Ever After: Wagadzirira kuti 'sezvaiita Family'?